नेपालमा कोरोना भाइरसको जो’खिम कति, कसरी बच्ने ? यस्तो छ डा. पाण्डेको सुझाब – Khabarhouse
Khabar house | १९ फाल्गुन २०७६, सोमबार १७:०९ | Comments
काठमाडौं । छिमेकी राष्ट्र चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको छ । उक्त भाइरसबाट झन्डै तीन हजारको हाराहारीमा मानिसको मृ’त्यु भएको छ भने हजारौं सं’क्रमित छन् । विश्वभर फैलिएको कोरोनाको प्रभाव हालसम्म नेपालमा नदेखिए पनि निकट भविष्यमा नेपाल यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। अझ नेपालमा पुर्व तयारीको अभाव रहेकोले पनि यदि कोरोना लागिहालेमा धेरै धनजनको क्षेती हुन सक्ने आंकलन गरिरहेका बेला डा.रवीन्द्र पाण्डेले यसबारेमा केहि जान्नै पर्ने र पुर्व तयारीका बारेमा आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् । जसलाई जस्ताको त्यस्तै तल प्रस्तुत गरेका छौं ।
डा.रवीन्द्र पाण्डे, अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणले हरेक व्यक्तिको मनमा त्रास उत्पन्न गराएको छ। कोरोना संक्रमण संसारभर फैलिँदो छभने नेपाल त्यसको अपवाद रहन सक्दैन। कोरोना भाइरस नेपालमा फैलियो भने मनोसामाजिक तथा मनोबैज्ञानिक कारणले बढी क्षति हुन्छ। तसर्थ हामीहरु मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्दछ, मनोबल उच्च राख्नुपर्छ।
-कोरोना कमजोर भाइरस हो| यसको संक्रमण सबैलाई हुँदैन| दीर्घ रोगी, बृद्धबृद्धा तथा अन्य रोगसँग लड्ने क्षमता नभएका केही व्यक्तिलाई मात्र यो संक्रमण सर्न सक्छ। -कोरोना सर्यो भनेपनि आत्तिनु पर्दैन। यसको मृत्युदर निकै कम छ। १०० जनालाई संक्रमण भयो भने २ देखि ३ जनाको मात्र मृत्यु हुनसक्छ। सामान्य रुघाखोकीले विश्वमा प्रत्येक वर्ष ४,५०,००० व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भन्ने तथ्य बिर्सनु हुँदैन।
-कोरोना संक्रमणको औषधि छैन। तसर्थ उपचारमा धेरै खर्च हुँदैन। ज्वरो आए पारासिटामोल खाने, खोकी र सास फेर्न सजिलो हुने औषधि खाने, मनतातो झोलिलो खाना खाइरहने, आराम गर्ने। गाह्रो भएमात्र अस्पताल जाने । -कोरोना संक्रमण भएको १ व्यक्तिले औसत ३ देखि ६ जनालाई मात्र रोग सार्न सक्छ। तसर्थ कसैलाई संक्रमण भयो भन्दैमा सबै आत्तिनु पर्दैन।
– कोरोना बिरुद्ध मानसिक रुपमा तयार हुनको लागि, भोलि सहर लक डाउन भयो भने सुरक्षित हुनको लागि २-३ महिनाको जोहो गर्दा राम्रो हुन्छ। जस्तै : नियमित खाने औषधि, अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ , प्राथमिक उपचारका औषधि जस्तै – सिटामोल, रुघा खोकीको औषधि। – सहरमा संक्रमण तीब्र देखिन थालेमा गाउँ जानु उत्तम विकल्प हो। गाउँमा कोरोना संक्रमण फैलिने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ।
– विश्वासिलो मेडियाको मात्र समाचार पढ्ने, सुन्ने, विश्वास गर्ने बानी बसाल्दा अनावश्यक मानसिक दवाव झेल्नु पर्दैन। – बजारमा मास्कको अभाव छ | कोरोना संक्रमण रोक्नको लागि मास्कको भूमिका निकै कम छ। बराबर हात धुने, सफा रहने गर्यो भने कोरो ना संक्रमण सर्दैन। तसर्थ मास्क नपाएपनि डर मान्नु पर्दैन। मास्क भन्दा पंजा महत्वपूर्ण छ।
– बजारमा ह्याण्ड स्यानिटाइजरको अभाव भएमा स्प्रिट-कपास, साबुनपानी आदिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। – कोरोना संक्रमण फैलियो भने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सेना, प्रहरी लगायतले अस्पताल, चौर ( टेन्ट ) आदिमा राखेर उपचार गर्छन । विश्व स्वास्थ्य संघ, बिदेशी स्वयमसेवी संस्था, बिदेशी राष्ट्र लगायत धेरैको हामीले सहयोग गर्नेछन्। – कोरोना भाइरसको लागि गर्मी प्रतिकूल मौसम हो। हामीकहाँ गर्मी सुरु भएको छ। तसर्थ जाडोमा जस्तो छिटो फैलिने सम्भावना एकदम कम छ।
– कोरोना भाइरस बिरुद्ध खोप, औषधि आदिको अनुसन्धान भइरहेको छ। – क्यान्सरलाई त आत्मबलले जित्न सकिन्छ भने यो केवल रुघा हो। तसर्थ डराउनु पर्दैन। – यसको रोकथाम हाम्रो हातमा छ । भीड भाडमा नजाने, हात धोइरहने, बिना काम घर बाहिर नजाने गर्दा ९० % रोकथाम हुन्छ। ( डा.रवीन्द्र पाण्डेकाे फेसबुकबाट साभार)